केदार कोइरालाको हेडलाइन न्यूजमा पत्रकारिताको मैलो बिम्ब – MySansar
केदार कोइरालाको हेडलाइन न्यूजमा पत्रकारिताको मैलो बिम्ब
Posted on June 9, 2018 by mysansar
नेपाली पत्रकारितामा केदार कोइरालाले जीवनमा कति समाचार बनाए? बोले वा भने ? यो बेहिसाब कथा हो । तर खबर खेतीका यी पात्र आफै खबर हेडलाइन बनेको प्रसङ्ग भने उनी एकथान केदारको मात्रै मामलो होइन, बरु पत्रकारमाथि कस्तो सम्मको षडयन्त्र हुनसक्छ भन्ने ठुलो संसार चियाउने एक सानो ऐना हो।
नेपाली प्रेस अहिले जुन व्यावसायिक वा व्यवसायिकता उन्मुख चरणमा छ, त्यसको जग बसाउने एक संघर्षशील पात्र मध्येका एक इँटा हुन् कोइराला । पंचायतकालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि कोइरालाहरूको पुस्ताले जेल जीवनको सामना गरेर आर्जेको संर्घषको उपज नै हो अहिलेको पत्रिकादेखि टेलिभिजनसम्मको बेलगाम सञ्चार दुनियाँ । कोइराला सफा मनका कालो वर्णका झर्रा, टर्रा पत्रकार हुन र उनले अहिलेसम्मको पत्रकारिता करिअरमा मूलतः टेलिभिजनबाट असल सञ्चार कर्म पस्केका छन् । उनले सायदै पत्रकारितामा अपराध गरेका होलान् ।
तैपनि पछिल्लो पट्क एक चलेको अनलाइनले केदार कोइरालालाई खुइल्याएर अदालती निर्णयको आडमा जुन मुख्य समाचार बनायो र फेसबुकमा बुस्ट गरयो, त्यसपछि मात्रै यी शब्दहरू बुनिदै छन्। यी शब्दको अभिप्राय कोइरालाको आरती उतार्ने नभई किन केही मिसन अनलाइनहरू कोइराला जस्ता पात्रहरूलाई झम्टिनन्छन भन्नेमा केन्द्रित छन्।
यो समाचार प्रकरणमा नेपाली प्रेसको जुन विम्ब देखिन्छ, त्यो आम रूपमा पत्रकारितामा नै लाग्नेहरुका लागि एक पक्षिय सूचनामा आधारित मात्रै हुनु हुँदैन भन्ने पंत्तिकारको मत हो । किन भने यो समाचार सुनियोजित रूपमा बुनिएको समाचार हो भन्ने तथ्य उसको प्रस्तुति र बेमौसमी प्रकाशनले स्पष्ट पार्छ ।
२०७४ जेठ १२ गते प्रहरीले कोइरालालाई दागेकै हो, थुनेकै हो, जेल चलान गरेकै हो । किन त्यसो गर्‍यो यो पुलिसले ? त्यो पटाक्षेप अदालतल नै गरिसकेको हो । त्यसैले घटनाको पृष्ठभूमि अब विगत भैसक्यो, त्यतातिर नजाऔं। तै पनि अहिले एक अनलाइन मात्रैले उच्च महत्त्वका साथ अदालती निर्णयको आडमा किन कोइरालालाई सिध्याउने गरी बुस्ट गरी गरी हेडलाईन बनाइरहेको छ त ? यसका केही कारणहरू छन्
१. कोइरालाले करिब २ महिना अघि मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट आफू माथिको अभियोगमा सफाइ पाएका हुन्। उनले पाएको सफाइ उनलाई थुन्नेहरुका लागि हजम भइरहेको थिएन। खास गरी सिविन र तत्कालीन एक प्रहरी हाकिम, जो अहिले माननीयको बर्दीमा सूर्यको न्यानोमा छन्, उनलाई जेलमै सडाई दिन चाहिरहेका थिए। तर अदालती आदेश उनीहरूको रुचिमा नआएपछि फेरि साबिकको माउन्टेन टेलिभिजनमा सञ्चार कर्ममा फर्केका कोइरालालाई पुनः पुनरावेदन अदालत मार्फत अंकुश लगाउन उनीहरूले सुनियोजित रूपमा यो खाले समाचार खेती गरिरहेका हुन । पुनरावेदनको म्याद सकिनै लाग्दा प्रायोजित रूपमा आएको यो समाचार कोइरालालाई सिध्याउन चाहनेहरुको ग्राईन्ड डिजाइनको एक तुरुप मात्रै हो । सरकारी वकिल जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउन माथिल्लो अदालत जाओस् भन्ने एक दबाब श्रृखला मात्रै हो ।
२ दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ चाहिँ के भने स्वघोषित लोकतान्त्रिक कित्ताका पत्रकारको सम्पादकत्वमा रहेको अनलाइन नै केदार जस्ता प्रजातान्त्रिक मसिहाको विरुद्धमा उत्रियो । व्यक्तिगत वा व्यावसायिक रूपमा ती सम्पादक र कोइरालाको कुनै रिसइबी थियो भन्ने सतहमा देखिँदैन । तर पनि त्यही एक अनलाइन नै नियोजित रूपमा यो समाचार मार्फत कोइराला विरोधीहरूको मुखपत्र बनिदिन पुग्यो । विचार, सिद्धान्त, कर्ममा एकै घाटको पानी खानेहरु यसरी बाझ्ने खबर प्रसङ्ग बन्नु शायद लोकतान्त्रिक भनिने पत्रकारिताका लागि एउटा नयाँ सबक र मजाक पनि हो ।
३.कोइरालाले सफाइ त्यति बेला पाएका हुन, जतिबेला सम्मानित जिल्ला अदालतले सिविन र केही तत्कालीन प्रहरी हाकिम सापहरूको जिरुह भन्दा पृथक् प्राकृतिक फैसला गर्‍यो। फैसला नहुँदासम्म कोइराला जेलमा नै थिए । अब अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको झोक देखिने खालको समाचार छापेर फेसबुकमा बुस्ट गर्नुले स्पष्ट पार्छ की त्यस्ता नाम कमाएका अनलाइनहरू पनि प्रभावमा परेर नै समाचार बनाउँछन्। बिना केही लाभ यो समाचारले यति महत्त्व पाएको होइन नै । हो रहेछ भन्ने समाचारको प्रस्तुति र महत्त्वले नै प्रमाणित गर्दैन । अनलाइनको समाचारले अदालतको सफाइ दिने आदेशलाई मान्नु नपर्ने सन्देश दिएर किन केदारको खेदो खन्यो ? अदालतले दोषी करार गरीकन पनि केदार बाहिर भएका पक्कै होइनन्। श्रीमानको आदेश पालना गर्दा पनि केदार अपराधी शैलीमा प्रचारित हुनु उनीमाथिको पूर्वाग्रह सिवाय केही होइन ।
४. कोइरालालाई सुरु अदालतले सफाइ दिँदा क कसलाई सोधेन भन्ने त थाहा भएन तर कानुनी राज र विधिको शासनको वकालतमा धेरै कलम चलाएकाहरुले अहिले केदारका हकमा मात्रै अदालती फैसलाको आलोचना गर्नुले के स्पष्ट पार्छ भने अदालतको फैसला पनि आफू अनुकूल नभएकै आधारमा प्रेसले प्रतिवाद गुर्नपर्छ भनी यही समाचारका आडमा सेतो सन्देश दिन खोजिएको हो भने, त्यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना नै हो । किन भने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले त्यस्ता अनलाइनको आयस्रोतको हिसाब खोज्ने पत्र पठाउदा विशेष सम्पादकीय लेखेर आफ्नो हिसाब देखाउनै इन्कार गर्ने सम्पादकीय कलमहरू अहिले केदारलाई लोकमान भाग २ बनाउन उद्धत हुनु कुनै हिसाबले पनि मनासिब छैन नै ।
५.सामान्यतः अदालतमा मुद्दा पर्दा एक पक्षले हार्ने र एक पक्षले जित्ने नै हो । कोइरालाको यो मुद्धामा कोइराला मात्रै जितेका छैनन्, पीडित भनिएकी बालिका पनि जितेकी छिन । दुवै पक्षलाई वीन वीन हुने गरी जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले निकै व्यवहारिक र प्राकृतिक फैसला गरेको हो । कानुन अनुसारको प्रकृति र प्रकृति अनुसारको कानुनी व्याख्या भनेका सायदै यस्तै फैसलाहरू होलान् । तर यसैका आधारमा कोइरालालाई नै दानव बनाएर यत्रो महत्त्वको हेडलाईन बनाउनु जरुरी थिएन । ल ठिकै छ, अदालतका यस्तै चित्त नबुझेका फैसलाहरू विरुद्ध अब केदारलाई खेद्ने अनलाइनले जेहादी छेड्न थालेको हो भने अरू श्रृखलाहरु किन हेडलाईन बनिरहेका छैनन् त ? के अदालतमा केदारको मुद्दा बाहेक सबै सवालहरूमा रामराज्य चलेको हो त ?
६. ठिक छ, अदालती फैसला हार्नेका लागि पीडा हो र प्रेसका लागि मसला हो । तर यो फैसलाले कसैलाई हराएकै छैन भने किन यत्रो ठुलो प्रश्न अदालतको फैसलाप्रति अनि किन दुरासयपूर्ण प्रचार कोइराला विरुद्ध मात्रै ? जसलाई घरमा पालेका थिए कोइरालाले, उनैको प्रतिवादी भएर जेल बस्दै उनीलाई नै अदालतको आदेश अनुसार आर्थिक सहायता गर्ने कोइराला अझै कसुरदार हुन भनी प्रेसले नै करार गरिदिने हो भने के अब जिल्ला अदालत अनलाइनको मुख्यालयतिर सार्नुपर्ने हो त ? यो कुनै पनि जोड र कोणबाट मनासिब समाचार खेती होइन नै ।
छोरी सरह दशक बढी पालिएकी चेलीलाई अदालती आदेशमा १० लाख दिने केदारको कर्म नै उनको अपराध हो भने त न्यायको परिभाषा नै फेर्नुपर्ने होला । जहासम्म प्रश्न उठाउने सवाल छ, त्यो त जेमा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । अब पीडितले लाभ, आरोपीलाई सफाइ दिन अदालतले पाउदैन भने त त्यो त काबु बाहिरको कुरै भैगो ।
७.अदालत भनेकै प्रमाण केलाउने ठाउँ हो भने अदालतले दिएको फैसला के प्रमाणबिहिन नै थियो होला र ? डिएन परीक्षण वा अन्य प्रमाणमा निर्दोष साबित भैसक्दा पनि कोइराला यसरी हेडलाईन बनाईदा के उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा कुनै असर पर्दैन ? यसरी एउटै कर्ममा रहनेहरुले कसैका स्वार्थका लागि यो प्रकारको सञ्चार खेत ीगर्ने हो भने कस्तो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाको थिति बस्ला नेपाली प्रेसमा ? यो सबैका लागि विचारणीय प्रश्न हो र हुनुपर्छ।
८. कोइरालालाई सफाइ दिने अदालत नै गलत, उनलाई न्यूजचिफमा पुनर्बहाली गर्ने माउन्टेन टेलिभिजन पनि गलत, उनको मुद्धाको अर्को पाटो केलाउने पंत्तिकारहरु पनि गलत र कोइरालालाई हेडलाइन बनाउने मात्रै सही हुन भने त कसको के नै भन्नु रह्यो र अन्यथा यस प्रकारका अदालती पटक्षेपहरुलाई प्रायोजित खबर खेती नबनाउदा नै ठुला भनिने मिडियाको व्यवसायिकतामा अरू निखार आउथ्यो कि ?
९. हो कोइराला साँच्चै निडर छन् । उनी काँग्रेस भएर पनि आधिकारिक काँग्रेसै बन्न सकेनन् । उनी थुनिदा गृहमन्त्री थिए विमलेन्द्र निधि । तर निधिले कोइराला थुन्दा कान बन्द गरे । प्रेस युनियनको स्थापनामा केदारको योगदान नै थिएन झैँ गरी मौन रह्यो युनियन । आखिर बलेको आगो ताप्ने नेपाली प्रवृत्ति थियो त्यो । बरु उतिबेला मुखैमा रहेको पत्रकार महासङ्घको चुनावमा अध्यक्षका प्रत्याशी मानिएका केदारको जेल यात्रा अरू काँग्रेसै पत्रकारका लागि कुचोले बर्ढानु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाइदिए सरह बनिदियो । यही हो, काँग्रेसै पत्रकरहरुका हकमा श्यामका भेडा बाघले खाने गरेको कथाको पुनरावृत ।
१०.ठिकै हो, फेरि पनि सरकारी वकिलले यस्तै समाचार दबाबकै भरमा मुद्धाको पुनरावेदन गर्न सक्ने छन् । फेरि पनि केदार अरू थप तनावमा रहने छन् । पुनरावेदनमा तल्लो अदालतको फैसला उल्टाउन केदार विरोधीहरूले साम, दाम, दण्डभेद सबै हर्कतको भरिपुर प्रयोग गर्नेछन् । यसले मुद्दा सकिए पनि उल्झन अरू लम्विने छ । तर यो केवल समाचार खेती भैरहने छ । प्रेसले उठाउने मुद्दा यस्ता मिलिसकेका मुद्दा मात्रै बन्ने की अरू गम्भीर जनसरोकारका विषयमा पनि केन्द्रित हुने त ? बहस हुँदै जाओस् ।
सारमा कुरा के हो भने यहाँ केदार एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन । देशभक्तीपूर्ण केदारको पत्रकारितामाथिको पनि हमला हो यो प्रकरण । लोकतन्त्रवादी भनाउदाहरु बिचको यस खालको रुग्ण एकताको खडेरी पनि दर्शाउछ यस्तो घातक प्रवृत्तिले । यो एक व्यक्ति पत्रकारमाथिको मात्रै आक्रमण भनेर खुच्चिंग गर्ने प्रवृत्तिले भोलि काल नपल्कोओस । अदालतले केदारलाई सजाँय दिएको भए यी पङ्क्ति कोरिने थिएनन्, तर अदालतलाई त कम्तीमा मान्ने हो भने किन कोइराला मात्रै कथित कसुरदार र हजुर ? केदार हेडलाईन प्रकरणमा पत्रकारिताको कालो विम्ब अब अरू नथप्ने की ?
अदालतको ठहर यस्तो थियो
3 thoughts on “केदार कोइरालाको हेडलाइन न्यूजमा पत्रकारिताको मैलो बिम्ब”
रामहरि पन्त says:
त्यो अनलाइनको कामै यस्तै हो । कहिले चक्रपथलाई कालोपत्रे चउर भन्छ कहिले के
एनजिओमुखी पत्रकारिता भए पछी यसतइ हो नी
यस्तै हो सेत्पाटीलाई एनजिओको चाकरी गर्दै डलर झार्दैमा फूर्सद छैन । पत्रकारिता त साइड जब न ह ो